Facebook မှာ တစ်ခုခုကို Report လုပ်ချင်လာပြီဆိုရင် | Online Service Center Myanmar -->
Facebook မှာ တစ်ခုခုကို Report လုပ်ချင်လာပြီဆိုရင်
"Facebook မှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ စည်းကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေလျှင်၊ ချိုးဖောက်နေလျှင် တိုင်ကြား( Report လုပ် )ပါ"
Facebook ရဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Facebook ကို တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ တိုင်ကြားဖို့ နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်ကို ဒီ Video လေးကို ကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။ တိုင်ကြားချက်အားလုံးကို လျှို့ဝှက်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး တိုင်ကြားထားတာတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ စံနှုန်းတွေကို ချိူးဖောက် ၊ မဖောက်ဆိုတာကို အသိပေး ပြောကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံဘေးကင်းပြီး ပျှော်ရွှင်စွာ မျှဝေနိုင်ပါစေ။
Facebook မှ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒါများ၊ စည်းကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များကို အောက်ပါနေရာများ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Facebook Terms and Policies - fb.com/policies?ref=pf
Terms of Service ( Terms you agree to when you use Facebook. )
Data Policy ( Information we receive and how it's used. )
Community Standards ( What’s not allowed and how to reporta)
News Feed ပွတ်နေရင်းတွေ့တာကို Report လုပ်လို့အားမရရင်
အောက်က ခေါင်းစဉ်တွေကို သီးခြားတစ်နေရာမှာ ဝင်ရောက်ပြီး Report ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
What best describes the issue that you want to report?
I want to report something that shouldn't be on Facebook (e.g. photo, group, Page)
Someone is using my photos or my child's photos without my permission
Someone is threatening to share things that I want to keep private
Report something on Facebook ( အထက်ပါခေါင်းစဉ်ထဲမှ အကြောင်းအရာများ Report ပြုလုပ်လိုလျှင် အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ပြီး Report ပြုလုပ်ပါ။ )
Video by: Facebook Safety
#Facebook #FacebookSafety #Report #FacebookReport